Computer Technical Notes & Sharing Softwares: Hacker များသည် Yahoo ၀ဘ်ဆိုဒ်အားဖောက်ထွင်း၍ Password (၄)သိန်းခန့်ခိုးယူ
Windows Administrator Account password change သွား...
GTalk password ကို မြင်အောင်ကြည့်မယ် Software
System 32 BIT / 64BIT ဆိုတာဟာ???
နေ့တိုင်းနီးပါး သုံးရမယ့် Linux command ၁၀ ခု
နောက်ဆုံး အသစ်ထွက်လာသော Ubuntu 11.10 အကြောင်း တစေ့...
Application များအကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်စေရန်
Mobile Roaming Systerm
Web App နှင့် Cloud အကြောင်း
Window 8 OS တွင် ပါဝင်လာမည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် Featur...
Windows 8 ဖြန့်ချိမည့် ရက်ကို Microsoft ကြေညာ
Windows ပေါ်မှာ Ubuntu Linux ကို ဘယ်လို Install လုပ...
Adobe Photoshop CS6 Portable (Only 80MB)
တစ်ကမ္ဘာလုံးကို SMS ဖရီးပို့ရအောင်
Hacker များသည် Yahoo ၀ဘ်ဆိုဒ်အားဖောက်ထွင်း၍ Passwo...
Gtalk Portable အလန်းလေးပါ(New Skin)
USB Drive ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေ
Photoshop cs5 မြန်မာလို
software တွေကို License version ဖြစ်အောင် လုပ်နည်း...
IPHONE ,IPAD,IPOD တွေမှာ မြန်မာလိုပေါ်အောင်.....ပြု...
inux အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် Linux ဟာ Unix-Like ဖြစ...
နက်ဝက်ထဲကကွန်ပြူတာတွေ Hack မယ်
Facebook အတု သတိပြုရန်
Gmail Account ဖွင့်နည်း (နောက်တစ်မျိုး)
အွန်လိုင်းပေါ်မှာငွေရှာမယ် ( Make Money Online )
G-Mail မှ Free SMS ပို့ချင်သူများအတွက်
Password ပေးထားတဲ့ Computer ကို ဝင်ပြမယ်
Hacker များသည် Yahoo ၀ဘ်ဆိုဒ်အားဖောက်ထွင်း၍ Password (၄)သိန်းခန့်ခိုးယူ
မသာမာသူ hacker များသည် Yahoo ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှ username နှင့် password စုစုပေါင်း ၄၀၀,၀၀၀ ခန့်အား ဖောက်ထွင်းခိုး ယူခဲ့ကြောင်း Yahoo မှ ယနေ့တွင် အတည်ပြုသွားခဲ့သည်။
Hacker များသည် ယင်းတို့ ခိုးယူရရှိခဲ့ရသော အချက်အလက်များအား အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဖြန့်ဖြူးခဲ့ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
Yahoo ၏ ဆာဗာအချို့သည် ပြင်ပမှ ဖောက်ထွင်းမှုအား တွန်းလှန်နိုင်ရန် လုံခြုံရေး အလုံအလောက်မရှိသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ပြု လုပ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်ဟု သိရှိရပြီး ခိုးယူခံရသည့် password များသည် Yahoo ဆိုဒ်မှ သုံးစွဲသူများ၏ password များသာမကဘဲ၊ Gmail, AOL, MSN နှင့် Hotmail တို့မှ password များလည်း ပါဝင်သည်ဟု သိရှိရသည်။
Yahoo အနေဖြင့် တောင်းပန်စာ တစ်စောင်အား ယနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရသည်။ တစ်ချိန်က လူကြည့်အများဆုံး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သောYahoo သည် လက်ရှိအချိန်တွင် ဝင်ငွေကျဆင်းပြီး ဈေးကွက်အတွင်း ရုန်းကန်နေရသည့် Yahoo သည် တစ်နှစ် အတွင်း အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် နှစ်ဦး ပြောင်းလဲခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။
Yahoo ၏ ပြောခွင့်ရ အမျိုးသမီးက “ကျွန်မတို့ အနေနဲ့ ဖောက်ထွင်းခံခဲ့ရတဲ့ အဓိက ပြဿနာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး ပြုပြင်လျက် ရှိပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ခိုးယူခံရတဲ့ password တွေကို အမြန်ဆုံးပြောင်းလဲသွားဖို့နဲ့ ယခုဖြစ်ရပ်ကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို အကြောင်းကြားဖို့ အဓိကထား ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့်လည်း မိမိတို့ရဲ့ password များကို ရံဖန်ရံခါ ပြောင်းလဲသွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။” ဟု ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
credit : kokyikyaw
Posted by SLIP at 7:18 AM